पत्याउनुहुन्छ ? पानीले होइन केवल ढुंगाले बनेको नदी !(हेर्नुहोस फोटो) - पत्याउनुहुन्छ ? पानीले होइन केवल ढुंगाले बनेको नदी !(हेर्नुहोस फोटो) -
पत्याउनुहुन्छ ? पानीले होइन केवल ढुंगाले बनेको नदी !(हेर्नुहोस फोटो)
उज्यालो प्रतिनिधि १५ माघ २०७६, बुधबार फोटो समाचार
एजेन्सी । नदी भन्ने बित्तिकै कलकल बग्ने पानीको कल्पना गरिन्छ । तर रसियामा एउटा यस्तो नदी छ, जुन पानी होइन केवल ढुंगाले
यस पत्थर नदीमा ढुंगाका टुक्राहरू टाढासम्म फैलिएका छन् कि त्यो नदी जस्तै लाग्दछ । तर टाढाबाट हेर्दा बगेको नदीको बगर जस्तै देखिने त्यहाँ पानीको कुनै अंश छैन । रुसको यो रहस्यमय ढुंगे नदी वैज्ञानिकहरूका लागि समेत खोजको विषय बनिरहेको छ ।
प्रकृतिको यो अद्भूत ठाउँलाई स्टोन रिभरको नामले चिनिन्छ । विशाल नदी सुकेर ढुगामात्र बाँकी रहेकोजस्तो देखिने यस क्षेत्रमा ६ किलोमिटरसम्म ढुंगै ढुंगा थुप्रिएका छन् । ढुंगेनदी २० मिटरदेखि ७ सय मिटरसम्म चौडा छ ।
ढुंगाको आकार स–सानादेखि १० टनसम्मका रहेका छन् । यहाँ त्यतिधेरै ढुंगाहरू कहाँबाट आएर थुप्रिएका होलान् र कसरी त्यसले एउटा नदीको धारजस्तै स्वरूप लिए होला ? यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।
कतिपय वैज्ञानिकहरूले भने १० हजार वर्ष पहिले हिमनदी विस्फोट भएर बगेको पानीले ढुंगाहरू त्यसरी थुपारेको हुनसक्ने विश्वास गर्दछन् ।